आरबी भुजेल इन अञ्जनी शर्मा आउट : मुद्दाको कारण लड्ने, परिवारको कारण नलड्ने - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारआरबी भुजेल इन अञ्जनी शर्मा आउट : मुद्दाको कारण लड्ने, परिवारको कारण नलड्ने
March 25, 2021 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि मुख्य समाचार 0
डा. भुजेलको कारण कालेबुङबाट नउठ्ने भएकी शर्मा दार्जिलिङबाट उठ्नसक्ने बताइएको छ। मुद्दाको लागि लड्ने भएकी अञ्जनी शर्मा, परिवारको कारण चुनाउ लड्ने समष्टी फेरबदल गरिरहेकी हुन् कि यसमा पनि विमल गुरुङकै कुनै सेटिङ छ? भन्ने प्रश्न अहिले सचेतवृत्तमा उठिरहेको छ। भर्खरै उनले तृणमूलको लागि भोट माग्ने विमल गुरुङलाई महागद्दारको सङ्केत दिएकी थिइन्। सोही विमल गुरुङले डा. भूजेललाई टिकट दिने बित्तिकै अञ्जनी शर्माले कालेबुङबाट आफू नउठ्ने बताएकी हुन्।
केही समयदेखि विमल निकट रहेर राजनैतिक गतिविधि गरिरहेकी अञ्जनी शर्मा भुजेलले कालेबुङबाट विधानसभा चुनाउ लड्ने भएकी थिइन्।
विमल गुरुङले डा. आरबी भुजेललाई कालेबुङबाट गोजमुमोको पक्षमा टिकट दिने बित्तिकै अञ्जनी शर्माले कालेबुङबाट आफू चुनाउ नलड्ने बताएकी छन्।
आफू कालेबुङ छोडेर दार्जिलिङबाट चुनाउ लड्ने शर्माले मनाशय पोखेको नेपाली न्युज पोर्टल जनसंवादले उल्लेख गरेको छ।
विमल गुरुङले दिएको उम्मेदवार आरबी भुजेल अञ्जनी शर्माको काका ससुरा हुन्।
“आरबी भुजेल मेरा काका मात्रै होइनन्। तर राम्रा व्यक्ति पनि हुन्। यसैले उनीविरुद्ध प्रतिद्वन्द्विता नगर्ने मैले निर्णय गरेकी हुँ”, जनसंवादसित कुराकानी गर्दै शर्माले भनेकी छन्, “मैले गोर्खा स्वाभिमान र मुद्दाका लागि चुनाउ लड्ने अठोट गरेकी हुँ। त्यसैले कालेबुङको सट्टा दार्जीलिङबाट चुनाउ लड़्दा पनि मेरो मुद्दा यही रहेछ।”
अञ्जनी शर्माले दिल्लीमा रहेर जिएसएसएस मार्फत राजनैतिक गतिविधि गर्दै आइरहेकी छन्। 2017 मा जिएमसीसीका प्रमुख कल्याण देवान अनि विनय तामाङलाई दिल्लीमा धेरो हाल्ने कामसमेत गरिसकेकी हुन्।
विनय तामाङलाई गद्दारी गरेकोमा शर्माहरूले कडा क्षोभ प्रकट गरेकी थिइन्। यद्यपि, विमल गुरुङले गरेको गद्दारीप्रति भने उनीहरू केवल असन्तुष्टी मात्र देखापरेको छ।
विमल गुरुङले दिल्लीमा बसेर केही गर्न नसकेपछि मिडियाले स्टेरिङ कमिटीमाथि सवाल उठाएको थियो। सांसद राजु विष्टले स्टेरिङ कमिटी त बनाए तर गोरामुमो र विमल खेमा मोर्चाले प्रतिनिधि नदिएपछि त्यो त्यतिकै हरायो।
यसैबिच खबरम्यागजिनले दिल्लीमा बसेर आफूलाई गोर्खाल्याण्डको स्टेक होल्डर बताइरहने अञ्जनी शर्मालाई किन स्टेक होल्डरहरूले पहल गर्दैन भनेर प्रश्न गरेको थियो। शर्माले शीघ्र नै सर्वदलीय पहल गर्ने बताएकी थिएन। तर उनको त्यो पहल पटक्कै अघि बढेन।
खबरम्यागजिनले नै उनीसित यसबारे प्रश्न गर्दा विमल गुरुङले पहल गर्न नदिएको जनाएकी थिइन्।
प्रत्यक्ष होस् वा अप्रत्यक्ष शर्मा विमल निकट रहेर काम गरिरहेकी हुन्। भर्खरै उनले तृणमूलको लागि भोट माग्ने विमल गुरुङलाई महागद्दारको सङ्केत दिएकी थिइन्। सोही विमल गुरुङले डा. भूजेललाई टिकट दिने बित्तिकै अञ्जनी शर्माले कालेबुङबाट आफू नउठ्ने बताएकी हुन्।
डा. भुजेलको कारण कालेबुङबाट नउठ्ने भएकी शर्मा दार्जिलिङबाट उठ्नसक्ने बताइएको छ। मुद्दाको लागि लड्ने भएकी अञ्जनी शर्मा, परिवारको कारण चुनाउ लड्ने समष्टी फेरबदल गरिरहेकी हुन् कि यसमा पनि विमल गुरुङकै कुनै सेटिङ छ? भन्ने प्रश्न अहिले सचेतवृत्तमा उठिरहेको छ।